DAAWO: Gabar yar oo iyadoo gaari dardari rabo ay wax aan la aqooni dafayaan! | Hadalsame Media
Home Ku Biiri Aqoontaada DAAWO: Gabar yar oo iyadoo gaari dardari rabo ay wax aan la...
DAAWO: Gabar yar oo iyadoo gaari dardari rabo ay wax aan la aqooni dafayaan!
Waxaa jira marar ay dhacaan waxyaabo aan caadiyan loo baranin ama suurtagal ahayn ama la sharrixi karin, waxaana ka mid ah dhacdadan.
Muuqaalkan waxaa looga jeedaa gabar yar oo doonaysa inay jidka gooyso, waxayna kusoo beegmaysaa laba gaari oo xawaaraynaya, balse markii la is lahaa gaari baa ku dhacay wax baa dafaya oo geeynaya dhanka kale ee jidka.
Xitaa waxaa istaagaya darawalkii gaariga oo is leh hubi gabadha aad gaariga jiirsiisay, yeelkeede, waxaa afkala qaad ku noqonaysa inay gabadhu taagan tahay dhanka kale iyadoo aysan waxba gaarin oo jafjafanaysa.
Ma laga yaabaa in Alle qaddartii ay malaa’igi badbaadisey?
Previous articleKa bogo jilayaasha caanka ah ee qaatay diinta Islaamka! (Qaybtii 1-aad)
Next articleWAR CUSUB: Itoobiya oo ku dhawaaqday inay dhisanayso ciidamo badeed (Halkee bad u ah?)